warkii.com » Waa u dhamaatay Salman Khan iyo qaraabada Sushant oo ku dacwonayaan in wiilkoda Sallu dilay!!
Waa u dhamaatay Salman Khan iyo qaraabada Sushant oo ku dacwonayaan in wiilkoda Sallu dilay!!
Megastar Salman Khan ma ahan markii ugu horeysay muran dhexda ka galo waxaa jiraan kiisas badan oo xidigaan magaciisa lagu lifaaqo intooda badana cadeyn cad waa loo waayey laakiin dad walba oo kasoo dacwoodeen cadeyn buuxda ayaan heysana ee sharciga waxba inoo qaban waayey ayee ku qeyliyaan.
Hadaba kiiska Sushant dhinac ayaa laga soo galiyay Sallu waxaa labo maalin kahor -ka kasoo hadlay nin lagu magacaabo Devej Narain oo siyaasi ah waxuuna xidid la ahaa Sushant maadama uu sodog u yahay Sushant walaashiis ka weyn oo ninka qabo aabihiis waaye.
Ninkaan oo siyaasiin badan baraha bulshada ugu wacay ama Tagg dhahay sida Raiisulwasaaraha hindiya, wasiirka arimaha gudaha iyo madax kale waxuu sheegay dhowr qodob oo uu Salman Khan dacwo kaga yahay fadlan hows kaga bogo.
1-Waxuu yiri gabadheyda gaarigeeda waxaa bur buriyay Salman Khan hada kahor.
2-Salman ayaa -ka igala so hadlay ayuu yiri waliba qab Reply ah isagoo i aflagaadeyay iyo hadalo xushmad daro ah.
3-Waxuu yiri Sushant isma dilin ee waa la dilay dadkii ku lug lahaana waxaa kamid ah Salman Khan.
4-booliska xaafada Bandra ee magaalada Mumbai shaqadooda daacad ma ahan ayuu yiri ninkaan waliba Salman dhankiisa talaabo uma qaadi karaan oo wey ka cabsanayaan sida qoraalkiisa kuxusan.
5-Ugu dambeyn waxuu sheegay in booliska Bandra baaritaan ku sameeyn karin Sallu maadama uu difaacayo siyaasi halkaas degen ee lagu magacaabo Baba Siddiqui oo Salman saaxiib dhow yihiin sidaa aawged kiiska CBI halagu wareejiyo ayuu codsaday.
Ninkaan ayaa qoraalo iyo sawiro kusoo daadiyay -ka cadeymo ahaan si ay madaxdaas u arkaan balse nasiib xumo daqiiqado kadib ciwaankiisa hawada ayaa lagu cunay oo waa la masaxay gabi ahaanba ama waa la tirtiray (Delete) arinkaas fajaciso ayee ku noqotat dad badan.